Voina tany Antsiranana :: Hita faty nihantona ny miaramila iray nitsoaka ny fonja • AoRaha
Voina tany Antsiranana Hita faty nihantona ny miaramila iray nitsoaka ny fonja
Namono tena sa nisy namono? Tsy mbola fantatra hatramin’ny omaly ny antony namoizan’ny miaramila adjida-sefo iray ny ainy, tany Tanambao V, any Antsiranana, tamin’ny alin’ny alarobia lasa teo. Hita faty efa nikiraviravy tamin’ny tady teo amin’ny hazo iray izy.
Vao naiditra am-ponja vonjimaika, herinandro vitsy lasa izay, io miaramila io noho ny nahavoarohirohy azy tamin’ny halatra sonian’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, araka ny loharanombaovao avy any an-toerana. Tafatsoaka ny fonja izy no izao nindaosin’ny fahafatesana tamin’ny fomba tsy mazava izao.
Fitsaboan-tena ivelan’ny fonja
“Tsy mbola fantatra ny anton’io loza io hatreto. Manahy izahay ny amin’ny mety hisian’ny famonoantena teo anatin’ity tranga ity. Raha ny fanadihadiana hatreto dia manana olana, fara fahakeliny roa, mety ho antony nandrisika azy hamono tena izahay. Voalohany, manana olana any amin’ny Fitsarana izy tamin’ny fampidirana mpiasa tao amin’ny miaramila, vao herinandro vitsy lasa izay. Nisy halatsonian’ny minisitry ny Fiarovampirenena tamin’io, ka naiditra am-ponja vonjimaika izy, taorian’ny famotorana. Ankoatra izay, fantatra ihany koa fa manana olana manokana amin’ny fiainany izy. Ny fanadihadiana sy ny famotorana ihany anefa no hamaritra ny tena zava-nisy sy ny anton’ny fahafatesany”, hoy ny loharanom-baovao akaiky ny mpanao famotorana any Antsiranana.
42 taona io adjida sefo io izao namoy ny ainy izao. Hita tsy lavitra ny tranony, nihantona teo amin’ny hazo, izy tamin’ny marainan’ny alarobia tokony tamin’ny 6 ora. Misy ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana momba ity tranga mampalahelo ity. Efa eo am-pelantanan’ny fianakaviany ny vatana mangatsiakan’ilay miaramila.
Etamazaoron’ny tafika, ny jeneraly Rakotonirina Théophile fa “tena nifonja tokoa io miaramila io noho ny hosoka sy fampiasana hosoka tamin’ny sonian’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena”. “Nisy taratasy misy sonian’ny minisitra noentiny tany amin’ny orinasa iray tao Antsiranana mangataka hampiditra mpiasa. Niantso ny minisitra io orinasa io. Namaly ny minisitra fa tsy nanao izany. Nanomboka teo ny famotorana, ka niafara tamin’ny fampidirana am-ponja azy. Ny henoko momba azy taorian’izay, hoy hatrany itsy manamboninahitra ambony itsy, dia hoe narary izy dia noentina tao amin’ny toerampitsaboana an’ny Tafika malagasy tany an-toerana, tamin’ ny 14 aogositra, saingy tafaporitsaka taorian’izay. Io izy hita faty nihantona io, ny ampitso”.
Loharanom-baovao avy amin’ny fandraharahana ny fonja kosa no nampahafantatra fa “efa nanaovana filazana fikarohana ity miaramila ity, noho ny fitsoahana ny fonja, talohan’izao nahitana ny fatiny izao”.
Vono olona tany Toamasina Tovolahy roa maty voatifitry ny zandary
Lozam-pifamoivoizana Olona dimy naratra navadiky ny fiara
Fanafihana niharo vono
Fahaverezana vola :: Mpiasa vavy roa voarohirohy ho nangalatra fito tapitrisa ariary